အိပ်ယာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက် ၉ ချက် | Buzzy
အမျိုးသားတွေရဲ. ရင်ဘက်မှာ အမွှေးအမျှင် ရေးရေးလေး ရှိနေတာမျိုးကို ရင်ခုန်တက်ကြပါတယ် ၊ ထူလပျစ်ကြီးမျိုး မဟုတ်ပဲ သန့်ရှင်းတဲ့ အမွှေးအမျှင်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သေချာပေါက် မိန်းကလေးတွေ ကြွေမှာပါ ။
အမျိုးသား အများစုဟာ သူတို့ရဲ. အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးရင် အမျိုးသမီးတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ ယူဆထင်မြင်တက်ကြပါတယ် ၊ ဒါဟာ မှားပါတယ် ၊ အဂါင်္ကြီးတာဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေတာမို့ ဒါကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ သာမန်အရွယ်အစားကသာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ. ဝမ်းဗိုက်မှာ တောင့်တင်းတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတာမျိုးကို သဘောကျပါတယ် ။
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အမျိုးသမီးကို ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ရှိနေစေလိုသလိုပါပဲ ၊ အမျိုးသမီးတွေကလည်း အမျိုးသားတွေကို ရင့်ကျက်တဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ မြင်ချင်ကြပါတယ် ။ ကိုင်းထူထူနဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ မျက်မှန်မျိုးတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတာဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ရေပန်းစားသလို ၊ အမျိုးသမီးတွေကလည်း မိုက်တယ်လို့ ခံစားမိကြပါတယ် ။ သင်အကျီင်္ချွတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ တက်တူးတွေက အမျိုးသမီးကို ပိုပြီးတက်ကြွ လန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်။
ရေမွှေးသုံးထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သဘာဝအတိုင်း သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ အနံအသက်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
ဆံပင်အတိုထက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆွဲကိုင်နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိတာကို သဘောကျပါတယ် ၊ သူတို့ ပွတ်သပ်ရအဆင်ပြေအောင် ဆံပင်ကို ဆီလိမ်းထားတာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေရဲ. ယောင်္ကျားလေးတွေကို ပထမဆုံးအကြည့်ဟာ ခြေထောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် သင့်ခြေထောက်နဲ့ ခြေသည်းလေးတွေဟာ သန့်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ၊ ရိတ်သင့်ရင်လည်း ရိတ်ပေးပါ ။